Fikarohana momba ny firaisana Tovolahy miova ho toy ny tovovavy, mitazona ny toetran'ny lehilahy ary mahita ny fiainany taloha Home: Ny tantaran'i Nishith De | Dolon Mitra - Fikarohana momba ny vatana teraka
mpikaroka: Ian Stevenson, MD ary Profesora P. Pal
From: Ireo trangan-javatra momba ny vatana teraka tamin'ny taon-dasa: Volana 1, India,nataon'i Ian Stevenson, MD, pejy 281-311
Kitiho ireo sary mba hampitomboana azy ireo
Ny fiainana sy ny fahafatesan'i Nishith De
Nishith De, tovolahy, teraka tao 1940 tao an-tanànan'i Burdwan, any Bengal Andrefana. Ny renivohitr'i Bengal Andrefana dia Kolkata, fantatra amin'ny sarintany nomena ny marina.
Ny tanàna nahaterahan'i Nishith, Burdwan, dia fantatra amin'ny anarana hoe Barddhaman. Ao amin'ny sari-tany omena amin'ny ankavanana, Barddhamar dia voamariky ny marika A ary i Kolkata dia atsimon'ny teboka. Ny tanànan'i Narendrapur, izay ao anatin'ity tantara ity, dia atsimon'i Kolkata.
Ny rain'i Nishith, Anath De, dia nanankarena be. Baudi no anaran-dreniny. Izy dia nanana zandriny lahy antsoina hoe Sisil ary zandriny vavy.
Noho ny harenan'izy ireo, ny fianakaviana dia nisafidy ny tsy hifanerasera amin'ireo izay eo ambanin'ny sokajy sosialy. Ny fianakavian'izy ireo dia nifanaraka tamin'ny havany akaiky indrindra.
Nishith nanatrika sekoly teo an-toerana sy oniversite. Nanao baolina kitra sy kilalao izy. Nishith tsy nanana ny maha-olona ny elitista ny rainy ary nahatonga azy ho namana amin'ny olona rehetra ao amin'ny fiarahamonina, ny mahantra ary ny tombontsoa.
Nishith dia Manangana Ny Fahafatesana, Ny Faharatsiana sy ny Fahafatesana any Kolkata
Tany am-piandohan'ny 1964, tamin'ny taona 24, raha nanatrika ny Raj College tao Burdwan, Nishith dia nanala ny fanaintainany tany ambadiky ny lohany, niaraka tamin'ny tsy fahampian-tsakafo, ranomaso ary tazo. Tsy afaka nahita ny aretiny ny dokotera tany an-toerana.
Nishith dia lasa ratsy kokoa taorian'ny volana 6 ary ny rainy dia nametraka azy ho azo ekena ao amin'ny Calcutta Tropical School ny fitsaboana. Calcutta dia fantatra ankehitriny hoe Kolkata, izay 105 kilometatra na 63 kilaometatra avy ao Burdwan.
Tao amin'ny hopitaly, Nishith dia nahatonga ny paralysis sy ny tsy fahafahana miteny. Lasa anisan'ny koma izy taorian'io, ary maty tamin'ny Jolay 25, 1964 tamin'ny taona 24. Tsy nisy fantsona natao ary nodorana ny vatan'i Nishith. Nieritreritra anefa ny dokotera fa maty i Nishith, na voan'ny ati-doha.
Nishith Reincarnates ho tovovavy any Kolkata, toerana izay efa nodimandry
Dolon Mitra, tovovavy, dia teraka tany Kolkata tamin'ny volana 8, 1967, mikasika ny 3 taona taorian'ny nahafatesan'i Nishith. Ny rainy dia Audaryamoy Mitra ary ny reniny dia nantsoina hoe Kanika. Nanana rahalahy izy izay 4 taona efa antitra noho izy.
Taorian'ny nahaterahan'i Dolon, dia nifindra monina 10 kilometatra na manodidina ny 6 kilometatra atsimon'i Kolkata ho any amin'ny tanànan'i Narendrapur, izay fe-potoana eo amin'ny sarintany voalaza etsy ambony. Dolon dia nanomboka niteny teo anelanelan'ny 1 sy 2 taona.
Na dia zazavavy aza, Dolan dia te-hitafy ny akanjon'ny zazalahy ary milaza fa zazalahy izy teo aloha ary narary an-doha
Dolan dia manana tanjaka hitafy ny akanjon'ilay zokiny lahy, izay lehibe loatra ho azy. Raha mikasika ny 3 sy ny antsasaky ny taona izy, dia nanenina ny reniny noho io fihetsika io. Avy eo dia nananatra ny reniny i Dolan, nilaza hoe:
“Ankizilahy kely lehibe kokoa aho tao an-trano toa an'ilay lapa.”
Nanontany ny heviny ny reniny. Namaly i Dolan:
“Eny, Reny, milaza ny marina aho. Nanana zandriko lahy sy vavy iray aho. Nanana nenitoako matavy aho ary Baudi no reniko. Ento manakaiky ny lapan'i Maharajah aho dia hitarika anao ho any an-trano. "
Maharajah any India dia manondro mpanjaka na mpanapaka. Ny lapan'ny Maharaja ao Burdwan dia asongadina eo amin'ny sary ankavanana.
Noho ny tsy fisian'ny antony dia nanindrona ny tendany i Dolan ary nibanjina ny tampon'ny efitrano. Nanontany ny reniny hoe nahoana izy no nanao io fihetsika io. Namaly i Dolan fa fony izy tany amin'ny toeram-pitsaboana nandritra ny fiainany taloha, dia nalahelo mafy izy ary nitazona ny lohany tamin'ny toerana iray.
Fanambarana fanampiny nataon'i Dolan momba ny fiainany taloha
Ny fanarabiana ny reniny dia nanao ny akanjon'ny akanjon'ny ankizilahy dia nahatonga an'i Dolan hanao fanambarana fanampiny momba ny fiainany taloha.
Nilaza i Dolan fa niaina trano iray tany Burdwan izy. Nilaza izy fa henjana sy tsara tarehy ny rainy, na dia mahia aza ny dadan'i Dolan ary mainty hoditra. Nilaza izy fa tamin'ny fiainany taloha dia niara-nipetraka tamin'izy ireo ny raibeny ary naveriny fa nanana nenitoany matavy izy. Ny fanambarana nataon'i Dolan dia marina ho an'ny fiainan'i Nishith.
Nilaza i Dolan fa ny reny taloha dia nanao akanjony tsara ary nanao firavaka maro, izay marina ho an'ny renin'i Nishith. Mifanohitra amin'izany, ny reny Dolan dia nanao akanjo tsy misy firavaka.
Nilaza i Dolan fa teo akaikin'ny lapa Maharaja ny tranony taloha. Marina izany ho an'i Nishith, satria ny tranon-dry zareo dia ambany noho ny 300 metatra na metatra avy amin'ny tranon'I Maharaja ao Burdwan.
Nilaza i Dolan fa ny trano teo aloha dia tahaka ny lapa, lehibe sy marefo, miaraka amin'ny biriky vita amin'ny marbra na mosaics. Nanana efitra fisakafo maromaro hafa koa izy, izay teny an-dalambe avy amin'ny teehouse. Marina izany fanambarana izany ho an'ny tranon'ny Nishith.
Nilaza izy fa nisy serfa sy vorombola tao an-trano. Toa nanan-kery ny fianakaviana De, fa tsy nanana an'io. Ao amin'ny valan-javatry ny fananan'i Maharaja any Burdwan, dia nisy serfa sy vorombola. Ian Stevenson nanombantombana fa mety nisisika ny fahatsiarovany ny fiainany taloha sy ny an'ny Maharaja i Dolan. Ny fianakavian'i Dolan kosa dia tsy nanana paooks na serfa.
Nilaza i Dolan fa ny tranony taloha dia nanana tantara 2 ary ny efitranony dia teo am-pivarotana voalohany, teo ambonin'ny làlana na ny lalamby, teo akaikin'ny tohatra izay nitarihan'ny làlana mankany amin'ny trano. Nilaza izy fa tao anaty trano dia nisy bokim-bokatra varahina, ary koa boky maro, ary novidin'ny rainy ny akanjony maro. Nilaza koa izy fa nanana "vola be" ny rainy. Marina ireo fanambarana ireo ho an'ny fiainan'i Nishith.
Nilaza i Dolan fa nianatra tany amin'ny Raj College, nalaza tamin'ny ankavanana, ary nilalao baolina sy cricket teo izy. Nilaza i Dolan fa naratra nilalao baolina izy ary avy eo dia narary tao amin'ny tongony. Marina izany fanambarana izany ho an'i Nishith, anisan'izany ny famelezana amin'ny lohalika naterak'i Nishith nandritra ny filalaovan'ny baolina, izay nitarika ny fanaintainan'ny lohalika.
Nilaza i Dolan fa nanana akanjo lava misy tady manga izay akanjo ankafiziny indrindra izy ary: "Misy almirah ao amin'ny efitranoko, misy lobaka sy pataloha misy kofehy manga ao anatiny. Omeo ahy ireo! " Ny almirah dia midika hoe kabinetra misy vatasarihana na talantalana. Taty aoriana dia voamarina fa manana lobaka manga misy tadiny i Nishith.
Dolan dia nanoritsoritra zava-nitranga iray izay nahatongavan'ny fiara iray ho an'ny fampakaram-bady, namely fiara hafa ary rava. Nisy loza nitranga tamin'ny 1960, 4 taona talohan'ny nahafatesan'i Nishith. Anath De, rain'i Nishith, dia nitondra fiara niaraka tamin'ny fianakaviany ho amin'ny fampakaram-bady. Ny fiara dia namono hazo, tsy fiara hafa, izay niteraka fahafatesana. Iray amin'ireo novonoina ny rahalahin'i Anath, ilay dadatoany dadan'i Nishith. Nishith, izay tsy tao anaty fiara, no nitsidika ireo sisam-paty tamin'ny lozam-pifamoivoizana tany amin'ny hopitaly ary nitomany noho ny fahaverezan'ny dadatoany.
Nilaza i Dolan fa nandritra ny fiainany taloha, dia nalahelo izy teo amin'ny tendany sy ny lohany, izay nahatonga azy ho nentina tany amin'ny hopitaly. Nilaza izy fa efa ela izy no teo. Nilaza i Dolan fa lavo teo am-pandriana tao amin'ny hopitaly izy ary maty tany.
Nishith tokoa no nampidirina hopitaly tany Kolkata noho ny lohany sy ny fanaintainany, nidina avy teo am-pandriany ary tsy afa-niakatra tamin'ny tany. Niditra tao amin'ny koma nandritra ny 15 andro izy talohan'ny nahafatesany.
Raha ny fitambaran-taratasin'ny hôpitaly avy any amin'ny Sekoly momba ny fitsaboana any Calcutta Tropical dia nampiseho fa nisaorana tamin'ny Jolay 4, 1964 i Nishith ary maty tamin'ny Jolay 25, 1964.
Nishith, avy amin'ny tontolon'ny fanahy, dia nijery ny fatiny nalaina avy tao amin'ny hopitaly nankany amin'ny toerana fandoroana faty: Fahatsiarovana an'i Dolan taloha
Nilaza i Dolan fa nentina avy any amin'ny hôpitaly avy amina havana aman-tsakaizany izy ireo noho ny fandoroana faty. Ny havan-trano tokoa no nitondra ny vatanan'i Nishith tany amin'ny toeram-pitsaboana, ary nitondra ny vatany tao amin'ny tranokala fandoroana. Mariho fa ity fanambarana nataon'i Dolan ity dia manondro fa ny fanahin'i Nishith | Afaka nahita ny zava-nitranga tamin'ny tontolon'ny fanahy i Dolan taorian'ny nahafatesan'i Nishith.
Dolan dia manizingizina fa hoentina any Burdwan izy
Dolan dia nangataka imbetsaka tany Burdwan. Nanambara ihany koa i Dolan fa afaka mahita ny fiainany taloha izy raha nentina tany amin'ny lapa Maharaja any Burdwan.
Mba hanomezana fahafaham-po ny fangatahan'izy ireo tsy tapaka, nentin'ny ray aman-drenin'i Dolan tany Burdwan tamin'ny volana 1971 izy, teo amin'ny 4 taona. Narendrapur, tanàna nipetrahan'ny fianakaviana, dia 72 miles avy amin'i Burdwan. Noho io fitsangatsanganana io anefa, tsy afaka nahita ny fiainany taloha i Dolan, izay nahatonga azy tsy sambatra.
Rehefa niverina nody i Dolan, dia nanohy nanizingizina fa ny ray aman-dreniny dia nitondra azy ho any Burdwan. Nanaiky ny ray aman-dreniny tamin'ny farany ary namerina azy tany amin'ny 30 1972 4 tamin'ny volana 5 na XNUMX volana taorian'ny fitsidihany voalohany.
Ny renin'i Dolan dia nangataka fanampiana avy amin'i Pritima mba hahitana ny fiainany taloha
Mba hiomanana amin'ity dingana faharoa ity dia nifandray tamin'ny fianakaviana ny ray aman-drenin'i Dolan ireo olom-pantatra niaina tao Burdwan. Ireo havana ireo dia Nilachal Samanta sy Pritima vadiny. Nanontany an'i Samantas ny ray aman-drenin'i Dolan raha fantany fa nisy tovolahy iray nipetraka tao an-trano toy ny lapam-panjakana maty.
Tsy henon'ny ankizilahy izany zazalahy izany, saingy nanadihady ny fiarahamonina izy ireo ary nahafantatra fa mety ho ny zanakalahy iray antsoina hoe De, izay olo-manan-kaja sy manan-karena tao an-tanàna, ny toetran'ny olona niainan'i Dolan taloha.
Amin'ny alalan'ity fampahalalam-baovao ity dia niainga avy any Narendrapur i Bārwan sy ny reniny Kanika, izay fantatra amin'ny anarana hoe Barddahman ao amin'ny sarintany naseho teo ankavanana, noho ny fitsidihana faharoa tamin'ny faran'ny March 1972. Tsy nandeha tamin'ity diany ity ny rain'i Dolan raha tsy nino izy fa hahita ny zanany vavy ny tatitra momba ny fiainany taloha. Nihevitra izy fa fotoana fohy ny dia.
Nihaona tamin'i Pratima tao Burdwan i Dolan sy ny reniny, ary avy eo dia nankany an-tranon'i Prithwis De, nihevitra fa ity fianakaviana ity no niantsoana an'i Dolan. Soa ihany, rehefa nandre ny tantarany. Prithwis sy Mira, vadiny, dia nandray tsara ny mety hitranga tamin'i Dolan momba ny havany efa maty, Nishith De.
Nahita ny fiainany taloha i Dolan
Nanapa-kevitra ny vondrona fa hahita an'i Dolan raha nahita ny fiainany taloha. Mira nitarika an'i Dolan sy reniny tany amin'ny tempoly tsy lavitra ny lapan'ny Maharaja tao Burdwan. Navoakan'izy ireo avy eo izy mba handeha hijery raha afaka mahita ny fiainany taloha izay noresahiny izy.
Tamin'ity indray mitoraka ity dia nahomby tamin'ny dian'i Dolan i Dolan tamin'ny famoahana andianà arabe marobe izay nitarika ho amin'ny lalana tery. Nanaraka an'io lalana io izy mandra-pahatongany tao amin'ny toeram-pambolena sy fiompiana kely an-jorom-bala, izay toa tsapany. Avy eo dia nanondro trano iray teo akaiky teo izy ary nilaza fa ity no fiainany taloha. Izany no nahatonga ny tranon'i Anath De, rain'i Nishith De.
Ny antoko dia nandondona teo am-baravaran'io trano io sy Dolan, ny reniny, Kanika ary Mitra dia navela. Anath De, ilay lehilahy tao an-tokantrano, dia tsy teo tamin'izany fotoana izany, fa ny zanany lahy, ary vehivavy maro tao an-trano .
Dolan dia manondro ny fiainany taloha momba ny reny sy ny fiainany taloha Fotoana
Ny iray amin'ireo vehivavy ireo dia ny renin'i Nishith, Baudi, izay nipetraka tao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny niaraka tamin'ny vehivavy am-polony teo ho eo izay nitovy taona tamin'ny renin'i Dolan nangataka azy hanondro ny reniny tamin'ny fiainana teo aloha. Nibanjina an'i Baudi nandritra ny fotoana kelikely i Dolan ary niteny avy eo, ary nanondro azy hoe: "Ity no reniko."
Nandritra ity fitsidihana ity dia nanaiky ny efitranon'i Nishith i Dolan. Hoy izy: “Ity no efitranoko.” Nahita sarin'i Nishath koa izy ary nilaza hoe: “Ity aho.”
Dolan dia mahita ny fiainany taloha, ny fanalahidy ary ny sarin'ny fiainany taloha Ray
Neken'i Dolan ny kabinetra hazo izay nahitana ny akanjony taloha. Nisy koa kabinetra vy tao amin'ny efitrano izay nolavin'i Dolan araka ny azy. Nolazainy fa ny akanjony dia voarakitra ao amin'ny toeran'ny ambony almirah, izay nanondroany. Nangataka ny hamerenana ny almira izy avy eo ary ny toetrany taloha indrindra tamin'ny manga matevina dia hita tao amin'ny tohatra ambony
Nahita sary ihany koa i Dolan tao amin'ny kabinetra hazo ahitana andian-dehilahy maromaro maromaro mihinana sakafo. Nasaina nanondro ny rainy i Dolan. I Dolan dia namaritra tsara an'i Anath De ho ray aman-dreniny taloha.
Betsaka ny lakilen'ny almirah ary rehefa hitan'i Dolan izy ireo dia hoy izy: "Ireto no lakilen'ireo vatasarihana amin'ny efitrano famakiako." Nanondro efitrano hafa izy avy eo ary nilaza hoe “Ity no fianarako. Iza izao no mamaky eto? ” Ny efitrano no tena fianaran'i Nishith ary ny lakile fantany tao amin'ilay efitrano hafa dia nanokatra vatasarihana hita tao amin'ilay fianarana.
Dolan dia manondro ny fiainany taloha, renibe, nenitoa sy rahalahy
Taty aoriana, raha nijoro teo ivelan'ny trano tehouse i Dolan, dia nisy olona maromaro no nanolotra azy, satria naheno ny mpitsidika ity fitsidihana ity tamin'ny nahaterahan'i Nishith indray vao teraka. Iray tamin'ireo olona ireo ny renibeny patriarika an'i Nishith. Nanontany an'i Dolan io olona io hoe: "Iza aho?
Namaly araka ny tokony ho izy i Dolan fa ity vehivavy ity no renibeko avy ao amin'ilay trano nipetrahako.
Ankoatr'izay dia nanontany an'i Dolan i Nenit nenitoa Laxmi hoe iza izy. Namaly i Dolan, ilay "nenitoan'ny trano hafa." Raha ny marina, Laxmi, nenitoan'i Nishith, niaina teny an-dalambe tao amin'ny trano lehibe kokoa.
Niatrika ny fifandraisan'i Sisil De, rahalahin'i Nishith, i Dolan. Sisil nitsangana teo anoloany, tsy niteny na inona na inona. Nilaza toy izao i Dolan avy eo: "Izy no zandriko indrindra fa tsy zokiko lahy," izay marina, satria i Sisil no zandrin'i Nishith.
Taorian'ireny fanekena rehetra ireny sy ny famantarana ny fianakaviana, dia nahatakatra ny fianakavian'i Dee fa i Dolan dia namaritra ny fiainany taloha tahaka an'i Nishith De.
Ny tranga momba ny fanambadiana ao amin'i Dolan dia nanintona ny sain'ny Ian Stevenson, MD ao amin'ny University of Virginia
Niverina tany Narendrapur i Dolan sy ny reniny ary nitatitra ny zava-niainany tamin'ny rain'i Dolan, izay nifandray tamin'izy ireo tamin'ny gazety Kolkata, izay namoaka lahatsoratra momba ity tranga ity tamin'ny 7 1972 tamin'ny volana aogositra.
Tamin'ny Jolay 1972, ny Profesora P. Pal, mpiara-miasa amin'i Ian Stevenson, dia nanomboka nanadihady ny raharaha. Dr. Pal dia nitondra an'ity raharaha ity momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao indray ho any amin'i Stevenson, izay nankany India hanadinadina ny ray aman-drenin'i Dolan tamin'ny volana oktobra sy novambra 1972. Tamin'ny volana martsa 1973 dia niverina i Stevenson mba hanao dinidinika fanampiny momba ireo vavolombelo momba ity raharaha ity, manamarina ny fijoroana vavolombelona voalaza etsy ambony.
Stevenson koa dia nanamarika fa ny fianakavian'i Dolan dia tsy mbola tany Burdwan talohan'ny nitsidihany an'i Dolan tamin'ny Oktobra 1971 ary ny fianakavian'i Dolan dia mbola tsy nahalala na nandre momba ny fianakaviany talohan'ny fitsidihany faharoa an'i Burdwan tamin'ny Martsa 1972.
Ny toetran'ny toetran'ny lahy taloha an'i Dolan
Araka ny nomarihina, na dia tovovavy iray aza, tia maka ny akanjo sy ny akanjon'ny zokiny lahy ary ny pataloha i Dolan, na dia be loatra aza ireo akanjo ireo ho azy. Tiany koa ny milalao ny kilalaon'ny zazalahy, fa tsy mandray anjara amin'ny asa atao ho an'ny tovovavy.
Ny mahaliana, ny renin'i Nishith, Baudi, rehefa nihaona tamin'i Dolan ary nitory ny fiainany taloha, dia tezitra fa nateraka ho zazavavy ny zanany lahy. Nanahy ihany koa izy fa ny Dolan sy ny reniny dia mety hitaky ny harenan'ny fianakaviana De.
Fiovan'ny lahy sy vavy amin'ny fihazonana ny toetran'ny lehilahy: Nishith dia lahy lahy fa navaozina ho vehivavy. Na dia tovovavy Dolan aza i Tiana dia tiany ny hanao akanjo toy ny tovolahy sy tovovavy.
Fahatsiarovana jeografika: Tamin'ny fitsidihana fanindroany tany Burdwan, tsy misy filaminana, nitarika ny antoko i Dolan na dia nandrehitra ny arabe sy ny lalana aza ny fiainany taloha. Ian Stevenson dia namerina io lalana io nandritra ny fitsidihany iray ary nanamarika fa sarotra be ny mahita ny trano tsy fantany ny faritra.
Ity trangam-pandrefesana ity, izay nahita fonenana taloha, dia hita ihany koa ao amin'ny:
Fifandraisana vaovao navaozina tamin'ny nateraky ny fanambadiana: Niaraka tamin'ny fiainany taloha i Dolan.